Abakhiqizi be-UV LED nabahlinzeki | China UV LED Factory
Incazelo Yomkhiqizo Imisebe ye-Ultraviolet uhlobo lwemisebe kagesi, engakukhanyi okubonakalayo kepha ingxenye yemisebe kagesi ngaphandle kokukhanya okububende okubonakalayo. Ububanzi bemisebe ye-ultraviolet ngu-100-380nm, futhi umthombo wemvelo omkhulu kunayo yonke wemisebe ye-ultraviolet ukukhanya kwelanga. Idlala indima ebalulekile empilweni eMhlabeni, imvamisa kuye ngemvelo yayo. Umthombo wokukhanya we-UV usetshenziswe kabanzi ekomiseni kwepuleti, ukuvezwa, ukuphulukiswa kokukhanya neminye imishini, ku ...
Ukusebenza okusheshayo okuphulukisa i-5054 UV LED
Incazelo Yomkhiqizo Imisebe ye-Ultraviolet uhlobo lwemisebe kagesi, engakukhanyi okubonakalayo kepha ingxenye yemisebe kagesi ngaphandle kokukhanya okububende okubonakalayo. Ububanzi bemisebe ye-ultraviolet ngu-100-380nm, futhi umthombo wemvelo omkhulu kunayo yonke wemisebe ye-ultraviolet ukukhanya kwelanga. Idlala indima ebalulekile empilweni eMhlabeni, imvamisa kuye ngemvelo yayo. Umthombo wokukhanya we-UV usetshenziswe kabanzi ekomelweni kwepuleti, ukuvezwa, ukuphulukiswa kokukhanya neminye imishini, ku-PCB ...
Ukuthembeka okuphezulu kwe-3535 UVC LED light
Incazelo Yomkhiqizo Lo mthombo wokukhanya we-3535 we-LED uyisetshenziswa esisebenza kahle esisebenza ngamandla esingahle sisebenze njengamanje esishisayo nesiphezulu sokushayela. Umthombo wokukhanya we-Ultraviolet nge-wavelength ephakeme esukela ku-270nm kuye ku-285nm. Le ngxenye inokuphrinta ngonyawo okuhambisana nobukhulu obulinganayo be-LED emakethe namuhla. Usayizi: 3.5 x 3.5 mm Ubukhulu: 1.53 mm Izici Eziyinhloko ● Ukuthembela okuphezulu ● I-UV ejulile ye-UV enobude bokukhipha phakathi kuka-270nm kuya ku-285nm ● Iyahambisana ne-solder evuselelayo ...